Bulsho loo wada siman yahay
Abaalmarinta Ciladaha & Cognitive Disorders
Abaalmarinta Cudurka Maskaxda ee Neurobiology
Barnaamijyada la joojiyay
Maalgelinta & Foomamka
2019 Shirka McKnight ee Diiwaangelinta Naasnuujinta
Marka hore Ugu dambeyntii
(Sida ay u muuqato inay ka muuqato aqoonsigaaga dawladaada bixisay)
Taariikhda Taariikhda: MM waa isku darsamayaa YDY
Loo baahan yahay in la iibsado tikidhada diyaaradaha
Waxaan samaynayaa qorshe safar u gaar ah
Waxaan jeclaan lahaa wakiilka socdaalka ee McKnight inay ila soo xiriiraan.
Fadlan isticmaal sanduuqa hoose si aad u heshid faallooyin dheeraad ah (ku saabsan xayiraadaha cuntada, shuruudaha, iwm.), Ama aad waydiiso wax su'aalo ah oo ku saabsan shirarka:
Taariikhda iyo Waqtiga Gelitaanka Aspen*
Taariikhda iyo Waqtiga Ka Saarista Aspen*
Waxqabadka Sabtida ee Sabtida
Roobka sare ee riwaayadaha loo yaqaan 'Fork Whitewater Rafting'
Booqashadayadu waxay ku bilaabmaysaa iyada oo ah wadada ugu badan ee sawirrada 'Waqooyiga Ameerika' - Maroon Bells iyo Maroon Lake. Maroon Lake waxaa jiri doona waqti sawirro ah iyo in laga hadlo duur joogta maxalliga ah. Ka dib markii qof walba uu xannibay, waxaad bilaabi doontaa jidka 12-mile ee jeexjeexa waddada la mariyo dooxada Maroon. Safarkaagu wuxuu ku dhamaaday Aspen. Waxaan joojin doonnaa cunto fudud qaboojiyaha wadada.
Jidka Maroon Bells wuxuu u xiran yahay gaadiidka ugu badan ee gaadiidka inta badan xagaaga waxaana uu siiyaa fursad fiican oo lagu raaxaysto baaskiilada baabuurkaaga. Carruurta raaxo leh oo ay yaqaanaan bareegyada gacanta ayaa lagu soo dhaweynayaa inay raacaan baaskiilkooda gaarka ah, carruurta yaryar waxaan ku siin karnaa baaskiil, ama Ruglayda Burley ee loogu talagalay socod baradka.
Sidoo kale loo yaqaano webiga Thunder, qaybtaani waxay ka muuqataa muuqaal qurux badan iyo cadaanyo aan caadi ahayn. Waxay u fiicantahay kuwa bilowga ah iyo sidoo kale rafters khibrad leh. Safarkan wuxuu bilaabmayaa kaliya 5 mayl ka baxsan Aspen oo ku yaal Woody Creek Bridge waxana uu dhammaadaa 3 mayl ka hooseeya Basalt. Qaybtani waxay u dhowdahay Aspen iyo Snowmass micnaheedu waa wakhtiga gaadiidka aadka u yar ayaa ku lug leh. Fasalka III. Da'da Yar ee lagugula taliyay: 6 - 9: waxay ku kala duwan tahay heerka biyaha.
Kalluumeysiga kalluumeysiga ee wabiyada aan laga fogeyn ee reer Galbeedka Colorado waa hubaal mid ka mid ah raaxooyinka weyn ee nolosha. Hagaha ayaa kuu geyn doona qaar ka mid ah dhibcooyinka ugu xiisaha leh ee ku yaalla Waddada Wareega iyo Noocyada Frying Pan. Labadaba waxaa loo qoondeeyey sida Rugta Dahabiga ah ee Gold Medal Department of Duurjoogta si ay u muujiyaan kalluumeysiga naxwaha leh. Da'da ugu yar: 8.
Hel Abuuraha Neuroscience
Tani waxay ku jirtaa naqshadda loo baahan yahay si loo wajaho Noocyada Aaladda Ajax ee awoodda leh.